Semalt: Mampiasa Ireo Trangam-piarahamonina?
Michael Brown, Semalt Customer Success Manager , dia milaza fa tsy maninona ny fitandremana anao, ny spam dia hahazo mailaka foana amin'ny mailaka. Ny tena sarotra takarina dia ny fomba hitondran'ny spammers ny adiresy mailaka rehetra. Na dia azonao atao aza ny fepetra fisorohana, dia tsy misy azonao atao amin'ny olana. Amin'ny fotoana maharitra, mahita foana fomba hitondrana ny adiresinao mailaka ny spam. Ny mpampiasa fotsiny dia tsy mahatakatra ny anton'izany fomba fanao ratsy izany.
Ny Voxbox World Telecom Inc Kanada dia tsy heverina ho orinasa mahasoa. Na izany aza, toa tsy miraharaha izany ny spam. Mpitsoa-ponenana iray antsoina hoe Francis no nitazona an'io orinasa io tamin'ny mailaka. Nividy tahirin-tsoavaly avy amin'ny Voxbox i Francis ary avy eo dia nanapa-kevitra ny handefa hafatra hafahafa hitady mpitsoa-ponenana ary hividy ny anjarany amin'ny tombony.
Nanjary nalaza be ny famolavolana tahirin-tsakafo sy ny pompiera. Na dia manana solosaina spam aza ianao, dia mahita fomba foana ny spam mba tsy hanohanana azy ireo fa ny mailaky ny mailaka dia atolotra amin'ny olona voatendry. Aleony mampiasa ny tetikady voalaza etsy ambony satria manome fahafahana azy ireo hahomby raha tsy manana rohy mankany amin'ny tranonkalany iray handehanany amin'ny spam. Ny zavatra rehetra ilainy dia hafatra mitandrina ny tahiry.
Ny fikarohana nataon'ny profesora Jonathan Zittrain, profesora Oxford University ary Laura Frieder, profesora mpanampy ao Purdue, dia naneho fa ny antony mahatonga ny spammers hambom-po dia hoe ireo rafitra ireo dia miasa! Raha mandeha araka ny drafitra ny zava-drehetra, dia miteraka 5 isan-jato izy ireo, raha toa kosa ka mahatratra 7 isan-jaton'ireo fampiasam-bola ireo izay mividy ny volany.
Ny vaovao tsara dia ny fomba ahafahanao mampiasa fomba tsotra nefa mahomby mba hisorohana ny mpitsongo. Voalohany indrindra, mila mamafa ilay spam ianao. Na manao ahoana na amin'ny fomba mahafinaritra sy ny fakam-panahy ny tolotra dia, manohitra izany ary tsy mividy ny tahiry. Satria ny ankamaroan'ny olona dia mividy izany satria fotsiny hoe tsy azony hoe spam izany. Ary tadidio foana fa ny ezak'andramana hanamboatra baka haingam-pandeha dia afaka milalao anao Source .